News 18 Nepal || दर्दानाक अबस्थामा पनि कति संवेदनाहीन भएको हाम्रो राज्य ?
कोरोना महामारीले संसार आतंकित रहेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन चिन्तित रहदै भाइरस रोकथामका सम्पूर्ण उपायहरू प्रयोग गर्न सरकारहरूलाई अपील गरेको गरेकै थियो तर, हाम्रो देशको सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय भगवान भरोसामा दिन बिताइरहेका थिएँ । गणतान्त्रिक सरकार राजतन्त्रमा राजाले झैँ ‘पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून’ भन्दै पशुपतिको पुकारा गरिरहेर बसिरहेँ ।
शासकहरूमा न त इमानदारीता र इच्छाशक्ति देखियो न त नेताहरूमा सिद्धान्त निष्ठता । त्यस्को परिणाम आज जिन्दगी भरी सरकारलाई कर बुझाउँदा पनि यदि जनता भेन्टिलेटर र अक्सिजन नपाएर मृत्यु हुनुपरेको छ । समयैमा सतर्कता अपनाएको भए नेपाललाई कोभिड १९ बाट सुरक्षित राख्न सकिन्थ्यो । किनकि, नेपाल विश्वको काँठमा अवस्थित देश हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान जसरी समयमै व्यवस्थित गरियो, त्यसैगरी भारतको सीमाक्षेत्र सुरुदेखि नै व्यवस्थित गर्नसकेको भए आज यो अवस्था व्यहोर्नुपर्ने थिएन । नीतिगत रूपमा तहगत संरचना, उनीहरू बीचको चुस्तदुरुस्त समन्वय त्यस्तै पर्याप्त स्वास्थ्य सामाग्री, आवश्यक दक्ष जनशक्ति, व्यवस्थित क्वारेन्टिन, सुरुबाटै जनस्तरमा जनचेतना दिनसकेको भए कोभिड १९ माथि सजिलै विजय प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।
सरकार बेला कुबेला चाहिने नचाहिने फण्डा गर्दै हिँड्ने गरेको छ । देशले कोरोना कहर काटिरहेको बेला कहिले सरकार पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउँछ र देशमा बबण्डर मच्चाउँछ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनानुदिन बढेको बढेकै छ ।
न त महामारी नियन्त्रणमा सरकारले कुनै प्रभाकारी प्रयास गरेको देखियो, न त संक्रमितहरूको उपचारमा राज्यले दायित्व लिएको नै देखियो । स्वाव परिक्षणबाट समेत भागेर राज्यले आफ्नो निरिहता प्रदर्शन गरिरहेको छ । तैपनि दुनियाँसामु प्रतिवेदनमा भने कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको बयानबाजी गरेको गरेकै छ ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको दाबी गरिरहेको छ । सरकारको दाबी आफ्नै ठाउँमा छ । तर लकडाउनको एक बर्षलाई फर्किएर हेर्‍यौं भने कस्तो चित्र देखिन्छ त ? कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी भएसँगै गत वर्ष देखि अहिले सम्म स्वास्थ सामाग्रीजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील वस्तुहरूका खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरिएको छ । यसबीचमा प्राय: सबैको सबैको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने धोको पूरा भएको हुनुपर्छ । किनकि, सरकार बनाउन र भत्काउन सायद संसारकै च्याम्पियन छन् नेताहरु ।
नेताहरुको कुन आदेश मानेनौं हामीले ? राणा विरूद्ध लड्न बोलाउनुभयो । राणाशाही अन्त्य नहुन्जेल लड्यौं । पञ्चायतविरूद्ध लड्न बोलाउनु भयो । पञ्चायत नढलुन्जेल लड्यौं । जनयुद्ध लड्ने आदेश दिनुभयो । जनयुद्ध पनि लड्यौं । कृपया भनिदिनुस् नेतागण, हामीले तपाईंहरूको कुन आदेश मानेनौं ? हामीले तपाईहरूमाथि के अन्याय गर्यौं ? के अपराध गर्यौं ? के पाप गर्यौं ? जसको सजायँ हामी जनतालाई यति दर्दनाक अबस्थामा निर्ममतापूर्वक दिइरहनु भएको छ ?
हाम्रो भोटले राष्ट्रपति बन्नु भो, प्रधानमन्त्री बन्नु भो, मन्त्री बन्नु भो । हामीलाई शासन गर्ने शासक बन्नु भो । हामी नागरिकको अपेक्षा थियो, हाम्रा नेताहरू शासक होइन; हाम्रा सेवक बनुन् । हाम्रो असल अभिभावक बनुन् ।
समस्यामा साथ दिने सहृदयी साथी बनुन् । तर, तपाईहरू त हामीलाई सधैं शोषण गर्ने शोषक बन्नु भो । हाम्रो अप्ठेरोमा अट्टहास गर्ने शासक बन्नु भो ? सधैं कुकुर-बिरालाको खेल खेलिरहन तपाईंहरूलाई भोट दिएका होइनौं हामीले ।
अब हामीलाई सस्तो सपना होइन, वास्तविक विपना चाहियो । कृपया ! राष्ट्रवाद, राष्ट्रघात, पुँजिवाद, समाजवाद, साम्यवाद विभिन्न वादका नाममा आरोप-प्रत्यारोप र झगडा गर्न बन्द गर्नुस् । पार्टीका नाममा जन्मजात काँग्रेस र कम्युनिस्टमा नागरिकलाई कित्ताबन्दी गर्न छाडिदिनुस् ।
अहिलेको अवस्थामा यो पार्टी त्यो पार्टी छाड्नुहोस् । समस्या पर्दा एक ढिक्का रहेर आ-आफ्नो पहलबाट आवश्यक तयारी युद्धस्तरमा गर्नु जरुरी छ । अन्यथा, तपाइँहरुको कुर्शि जोगाउँदा जोगाउँदै प्लेग, कोलेरा, इबोलाले संसारमा जसरी लाखौं, करोडौं मान्छेको ज्यान लिएको थियो, त्यस्तै महामारीको रूप लिन सक्छ कोरोनाले पनि ।